Google+ ugbu a na-ejikọ taabụ ọkwa zuru oke | Gam akporosis
[APK] Google+ 6.9 na-ewebata tab niile maka ọkwa gị
O yiri ka ụmụ okorobịa ndị nọ na Google nọ na-agba ọsọ nke ebili mmiri ugbu a ka ụfụfụ ahụ niile na-ada n'ụkwụ ha n'ụdị akụkọ dị mma maka ọtụtụ ngwa ha kachasị mma. Naanị taa anyị zutere ọbịbịa nke atụmatụ ezinụlọ maka Google Play Music, ọ bụ ezie na anyị ga-echere ka anyị nwee ya na mba anyị. Naanị ụnyaahụ ọ bụ oge maka ya buffering egosi na vidiyo YouTube site na gam akporo ngwaọrụ mgbe a kwụsịrị bọtịnụ nkwụsị, ihe ọzọ na-adọrọ mmasị na-egosi na ha chọrọ ịga ezumike tupu ụbọchị ekeresimesi ndị ahụ abịarute ka ha na-ewepụta atụmatụ ọhụrụ ndị a niile tupu njedebe nke afọ.
Ugbu a ọ bụ oge Google+ na mbipute ya nke 6.9 na-ewebata ihe ngosi dị ụtọ dịka dum tab maka ijikwa amamọkwa ndị a nke na-abịarute kwa ụbọchị site na netwọkụ mmekọrịta a nke na-edo onwe ya ntakịrị tupu ihe agaghị ekwe omume na ụbọchị na izu mbụ ya. Newdị ọhụrụ a na-eweta mmezigharị ngụkọta na ihe bụ taabụ ọkwa dị ka a pụrụ ịhụ site na onyonyo enyere. Ma ọ bụrụ na ọ masịrị anyị mgbanwe a, otu na-eche ihe kpatara na ha ekpebibeghi ike mepee taabụ maka ịkpọ aha na ụdị ndị a. Ọfọn, ka anyị nwee olileanya na ha nwere ha maka afọ na-abịa, ọ bụ Google?
1 A ọhụrụ ngosi taabụ
2 Gaa na akụkọ ọzọ
A ọhụrụ ngosi taabụ
Ọtụtụ ngwa ebe ma Ọkwa na-arụ ọrụ dị oke mkpa Dị ka ọ nwere ike ime na Twitter ma ọ bụ Facebook, ọ na-emepe n'ụzọ dị ka a ga - esi gbasaa site na ebe bọtịnụ nnweta n'onwe ya. Nke a bụ etu esi hazie ya na Google+ yana na mgbe a gbatịrị ya, ọ na-ekpuchi ụzọ atọ nke ihuenyo ahụ na ihe fọdụrụ obere ohere maka ndepụta akụkọ ma ọ bụ ebe ọ bụla anyị na-eme nchọgharị na netwọkụ mmekọrịta a.
Ugbua na mbipute 6.8 nke ngwa a, a kpaliri interface na ọkwa ọhụụ na ala nke ngwaọrụ ka ọ dị ugbu a, na mbipute 6.9, ọkwa ahụ na-enweta ngụkọta mmezi nke na-ewetara anyị na ogwe ngwaọrụ na agba ya niile, akara ngosi emelitere maka ohere gị yana kọlụm sara mbara nke na-enye anyị ohere ịgụ ọkwa niile ndị ahụ.
A ọhụrụ taabụ na-enye ndị ọzọ uche na ojiji nke a ngosi panel na-abụkarị otu nke oghere ndị a na-agakarị Iji zaghachi ozi, nloghachi na-eso ndị na-eso ụzọ ma ọ bụ nweta nke ọ bụla n'ime ihe ndị ahụ anyị nwere ike ime site na taabụ ọhụrụ a.
Gaa na akụkọ ọzọ
Ọ bụ ezie na anyị ga-anọ n'ụzọ ahụ nwa oge, ịnwe taabụ zuru oke maka ọkwa nwere ike meghe ụzọ maka nwere ike họrọ n'etiti kwuru, zipụ ozi ma ọ bụ soro ndị na-eso ụzọ. N'ezie Google ga - amata otu esi enyekwu mmado na taabụ a nke na - enyefe onwe ya dịka otu n'ime akụkọ kachasị na Google na ọnwa ndị na - adịbeghị anya, ewezuga ihe mmezigharị ahụ na nhazi maka ụdị weebụ.
Site na ihe ohuru a, n'ezie na ụbọchị ole na ole sochirinụ, anyị ga-ahụ atụmatụ ọhụrụ n'ọtụtụ ngwa ndị ọzọ, ebe izu a abụwo otu n'ime ndị Google bi. Naanị ụnyaahụ ọ mere biri na Nexus 6 na ụlọ ahịa Google, nke mere na mgbe obere oge anyị ga-enwe ọbịbịa nke Mbadamba mbadamba Google haziri n'onwe ha. Anyị apụghị ichefu banyere Ihe ncheta Kalịnda Google nke ahụ ga-emesi ike iji ngwa kalenda a dị ka ndị ọzọ na-akwado ya, dị ka Nọgidenụ ma ọ bụ Google Ugbu a onwe ya.
Ezigbo izu maka Google na anyị bụ ndị na-emekarị relegate gị ọrụ na ngwa iji nweta ọtụtụ ihe na ekwentị gam akporo anyị. Ugbu a, anyị nwere ike ichere ịchọpụta ihe ndị Mountain Mountain Viewers ga-ewetara anyị na-esote tupu ụbọchị ekeresimesi eruo.
Budata ngwa nke Google 6.9
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » APK » [APK] Google+ 6.9 na-ewebata tab niile maka ọkwa gị
Zaghachi maria soledad saavedra campos
Notif Log na-enye gị ohere niile akụkọ ihe mere eme nke notma Ọkwa na-abata na gị mobile